Maxaa kaa Gudbaya? | Martech Zone
Shalay waxaan la qadeeyay saaxiibkeyga wanaagsan, Bill. Sidaan ku cunnay maraqkayagii digaagga ee cajiibka ahaa Brewhouse ee Scotty, Bill iyo waxaan ka wada hadalnay daqiiqadaas foosha xun ee guuldaradu isku badasho guusha. Waxaan u maleynayaa runtii dadka hibada leh inay awoodaan inay indha indheeyaan halista oo ay abaalmariyaan oo ay wax u qabtaan si waafaqsan. Waxay ku boodaan fursadda, xitaa haddii halista aan laga gudbi karin… oo badanaa waxay u horseedaa guushooda.
Haddii aan ku waayo, ila joog. Waa tan tusaale….
Shirkadda A sameeya codsi fudud oo shaqeynaya, laakiin ka maqan dhammaan astaamaha lagama maarmaanka u ah waqtiga hore. Marka ay fursaddu timaaddo in madaxa loo galo madaxa tartanka, Shirkadda A ayaa dejisa filashooyin waxayna go'aamisaa jadwal dagaal badan oo lagu horumarinayo astaamaha haray ee lagama maarmaanka u ah dhammaystirka qandaraaska. Dhanka kale, iyaga oo aan helin xalka, waxay u boodaan wadahadalada oo ay sameeyaan iibka.
Shirkadda B wuxuu arkaa fursada, laakiin wuu ogyahay inaysan buuxin karin shuruudaha dalabka soo jeedinta, sidaa darteed waxay si qurux badan u fooraraan oo ay si isdaba joog ah ugu sii socdaan qorshahooda kaamilnimada iyo adduun weynaha.
Shirkadee saxan? Shirkadda A waxay halis weyn ku qaadataa qandaraaska iyo macmiilka. Waxay halis gelinayaan sumcadooda warshadaha sidoo kale. Xaqiiqdii, waxay u badan tahay inay jirto fursad wanaagsan oo ay ku qaban doonaan shaqada inteeda badan laakiin dhammaantood maahan. Shirkadda B waligeed xitaa miiska ma soo saarin, xaqiiqda ah inaysan helin qandaraaska ayaa iyaga hoos imaan kara intaanay shirkadda A weligeed dhammaan.
Waagii hore, injineerka muxaafidka ah ee aniga igu dhex jira ayaa snicke gareeyay Shirkadda A mana aanan u haynin wax ixtiraam ah iyaga iyo wax-soo-saarkooda oo aad u sarreeya Laakiin waqtiyadu way isbadaleen, miyaanay ahayn? Haddaan nahay macaamiisha shirkadaha, waxaan u muuqanaa inaan u cafiyi doonno shirkadaha aan sameyn karin waqtiyada kama dambaysta ah ama aan la imaan karno waxyaabo kooban. Waxaan ku sameynaa waxa aan haysano.
IMHO, Shirkadda B fursad uma taagto maalmahan. Waxaan bilaabay inaan rumeysto awooda aan ku heli karo iibka goor hore oo aan u jajaban karo wax soo saarka waa waxa kaa dhigaya inaad guuleysato. Haddii ay jirto fursad aad ku guuleysan karto, waxaad u baahan tahay inaad had iyo jeer isku daydo. Haddii kale, fursaddu way ku dhaafaysaa.
Tani waa run shaqooyinka, tani run bay ku tahay qandaraasyada, waana run marka la suuqgeynayo. Haddii aad sugto inaad naqshadeyso ololaha saxda ah, waligaa fursad uma heli doontid inaad bilowdo. Halkaas is farqi udhaxeeya kaamil ahaanta iyo xawaaraha. Haddii aad waxyar bixin karto, laakiin aad u geyn karto marar badan, waxaad qaadan doontaa ganacsiga.
Haddii aan isbarbardhigayo, waa inaan qaataa waxa iska cad, Apple iyo Microsoft. Vista wuxuu ahaa sanado sii deyn weyn oo sugitaan ah. Leopard, dhinaca kale (oo aan horay u dalbaday shalay) waxay umuuqataa inay tahay mid sifiican u xoojineysa muujinta OSX. Microsoft waxay soo saareysaa XBox 360, oo ah nidaam ciyaaro badan oo warbaahin ah oo leh gambaleellada iyo foorida oo dhan. Microsoft waxay soo saartay Zune, oo ah mid aad u fiican, oo ah ciyaartoy warbaahin shaashad ballaaran leh oo si dhib yar suuqa u xoqday. Dhanka kale, Apple wuxuu bilaabayaa iPod, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod cusub, Mac Mini, Bandhigyada Cinema, Appletv, iPhone, iPods midab leh, iPod Touch, iMac, OSX Leopard… miyaad bilaabeysaa inaad aragto waxa dhacaya?
Microsoft waxay leedahay wareegyo ballaaran oo gaabis ah oo leh meelo hoose oo hooseeya iyo hoos aad u weyn. Apple sidoo kale caqabado ayaa la soo darsay, laakiin ka hor inta aan Apple lala xisaabtamin ama laga xishoon muddo dheer, waxay soo bandhigayaan wax cusub. Apple kama buunbuuniso sanad sida Microsoft sameyso, waxay ku been abuuraan xanta halkan ama halkaas ka dibna way bilaabaan. Oo waxay dareemeysaa inay bilaabeen toddobaad kasta! Dadku way cafiyaan cilladaha nooca koowaad (qiimaha iyo tayada) waxayna si farxad leh ugu gudbaan nooca saddexaad iyo kan afraad. Dareenkeenu waa gaaban yahay, Apple-na si xamaasad leh ayey uga faa'iideysanaysaa.
Maxaad u oggol tahay inuu kaa soo ag maro? Jooji sugida waxyaabaha sifiican ugu soo boodaan. U soo bood maanta ama daaw fursada ay ku dhaafayso. Waa sida kaliya ee adiga ama ganacsigaagu u guuleysan doono.
Fiiro gaar ah: Qaar ka mid ah faahfaahinteyda ku saabsan Apple ayaa dhiirrigeliyay tan boostada weyn ee guusha Apple ee Daring Fireball.
Tags: ballancodsiga ballantakaararkaKaararka kirismaskashaneemogoogle oo lagu daray infographicgoogle oo lagu daray tirakoobkaararka fasaxaxilliga fasaxaindianapolisjonathan salem baskinjadwalka khadka tooska ahjadwalka internetkais bedelidcalaamadaha bulshadabaarka sare
Ilaahyadi daanyeer ayaa hadlay oo Scott Adams ayaa qoray buug!
Baloogyada internetku maahan Madal - Iyaga oo ka dhigaya Qalab Suuqgeyn Weyn
Oktoobar 25, 2007 at 3:05 PM
Shirkadda A illaa hadda waxay leedahay dariiqa saxda ah. Odhaahda ah “Way kafiican tahay in 80% ay sax ahaato maanta marka loo eego 100% midig berrito” weligeed kama run badnayn sida ay tahay maanta. Xawaaraha abid sii kordhaya ee ay wax ka dhacaan dunida ganacsiga ayaa wali sii yaabaysa.